CJSOI 2016 : mbola mitarika amin’ny filaharana i Madagasikara | NewsMada
CJSOI 2016 : mbola mitarika amin’ny filaharana i Madagasikara
Mazava ny fandresen’i Madagasikara, amin’ny lalao CJSOI 2016. Mitana ny lohalaharana mantsy ny zatovo malagasy, eo amin’ny fandrombahana ny medaly volamena. Novereziny lavitra ireo Nosy rahavavy, tamin’ity.
Hikatona amin’ny fomba ofisialy anio, ny andiany faha-10 amin’ny lalao CJSOI. Ny famaranana, amin’ny lalao baolina kitra sy ny «course medley» no hamarana ny fifaninanana amin’ity anio ity. Hatreto aloha, efa mazava fa mitana ny laharana voalohany eo amin’ny fahazoana medaly ny Malagasy. Na inona na inona vokatra androany, tsy mampiova na inona na inona intsony izany. Tsy nitsanga-menatra i Madagasikara nampiantrano ity fihaonana ity satria nilamina ny fikarakarana ary nizotra tao anatin’ny filaminana ny fifaninanana rehetra.
Manampy ny Telma
Noho ny fanampian’ny Telma, mpiara-miasa ofisialy voalohany amin’ny lalao CJSOI , miparitaka haingana sady ara-potoana manerana an’i Madagasikara, ireo voka-dalao rehetra, amin’ity fihaonana ity. Eo koa ny fanarahana mivantana izany amin’ny alalan’ny fahitalavi-pirenena, miaraka amin’ny Backbone national. Afaka mianoka izany koa ireo Malagasy mipetraka ivelan’i Madagasikara.
Marihina fa ho hita mivantana amin’ny TVM anio, ny lalao famaranana, amin’ny baolina kitra, ihaonan’ny Barea sy La Réunion, ary ny lanonam-pamaranana hatao ao amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena.
Ankoatra izay, nametrahana «connexion internet by Telma», ihany koa ny ivontoerana iasan’ny mpanao gazety malagasy sy vahiny, any amin’ireo kianja rehetra izoran’ny fifaninanana, ka ahafahana mampita ireo vaovao rehetra tsara ho fantatra.